Lisitry ny lohahevitra - Tononkira Malagasy - serasera.org
Adin'ny iray Adin'ny 5 lasa Iray andro lasa Dimy andro lasa Mihoatra
Adihevitra momba ny: Eto no ahitanao ny fanontaniana madinidinika rehetra sy ny valiny. Momba ny takelaka tononkira Inona no ato amin'ny takelaka tononkira.serasera.org ? Ny takelaka tononkira.serasera.org dia takelaka vokarin'ny serasera.org ahitana tonokira, mpihira ary tondrom-peo Malagasy. Inona izany tondrom-
58 ny 06/Dec/2019 22:20
Adihevitra momba ny: Fanorotoroana
4 ny 12/Feb/2020 18:34
Adihevitra momba ny: Ny takelaka tononkira.serasera.org dia nosokafana voalohany tamin'ny 20/10/2001. Mpikambana vitsivitsy no nampiditra hira vitsivitsy tamin'izany. Ny tanjona dia ny hanaovana ny takelaka ho fitehirizana tononkira malagasy mba hahafahan'ny maro mampiasa izany. Mazava ho azy, tsy voatery ho marina tant
58 ny 05/Oct/2019 07:39
Tononkira amin'ny Android
Adihevitra momba ny: Version gratuite sans code Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana ka tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo ny version Tononkira Malagasy Sans Code:Alaivo eto Chercher directement le code Ny tenimiafina amin'ity volana ity ho an'ilay App version gratuite dia azonao alaina&nbs
33 ny 09/Nov/2019 16:28
Adihevitra momba ny: Mahaliana anao ity tononkira ity amin'ny Android tsy mila internet? Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
100 ny 11/Feb/2020 07:58